यी राशि हुने युवतीहरु हुन्छन् अत्याधिक भाग्यशाली! – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र १५, २०७७ समय: १०:२८:३८
ज्योतिष शास्त्रमा पनि कुण्डली अनुसार नै उसको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि हुने युवतीहरु धेरै नै भाग्यशाली हुने गर्छन् । यो राशि हुनेहरुलाई धनी पति मिल्ने र पतिले धेरै माया गर्ने बताइएको छ ।
जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु ।
Last Updated on: March 28th, 2021 at 10:28 am